Ogaden News Agency (ONA) – Waa waqtigii la fashilin lahaa Liyu-boliiska ay safaaradaha qoranayaan
Waa waqtigii la fashilin lahaa Liyu-boliiska ay safaaradaha qoranayaan
Gumaysiga oo doonaya inuu ka helo jaaliyadaha dhexdooda jawaasiis iyo qowlaysato damiirlaawe-yaal ah ayaa kulano qarsoodi ah kolba ugu yeedha koox la soo magacaabay. Safaarada wayaanaha ee Brussels oo koox uga yeedhay Holland la doonayay in lagu hawlgaliyo ayaa waxay kula shireen Magaalada Rotterdam meesha ciwaankeedu yahay Engele Grandcafe( Staionsplein 45).
Jaaliyada Somalida Ogadenya ee Holland oo doonaysa inay cadawga tusaan in goob walba oy moodaan in ay ayaga gaar u tahay lala joogo, dagaalkanaguna uusan ahayen mid ka socda gudaha Ogaadeenya oo kali ah, ayaa fashiliyay isku daygan cadawga naf lacaariga ah ay ku doonayaan in kulamadan noocan oo kale ah ay ku kasbadaan jawaasiis fara badan.
Wuxuu ahaa markii labaad ee jaaliyadda Holland ay ka hortagaan isku dayga Jaajuus raadinta ah ee ka dhaca Holland, iyado midii hore uu ka dhacay magaalo layiraahdo Eindhoven, halkaas laga caydhiyay in badan oo hunguri xumo ama wacyi gaabni ay waday, waxaana ku soo hadhay goobta maalintaa hore 6 ruux oy 3 kamid ah ahaayeen kuwii wax qaban qaabin hayay.
Qorshaha wuxuu ahaa in kooxdaa dhabarka laga soo taabtay un ay goobta xaadiraan ahasa ahaatee waxaa isa soo taagay madsha 7ba ka mid ah xubnaha jaaliyadda Holland oo rag iyo dumarba leh oo kula kulmay qaar ka mid ahaa mucaaradkii xorta ahaa oo ayaguna halkaas yimid.
wuxuu yidhi xubinka na soo siiyay warbixinta; “Waxaanu ahayen dad xor ah oo ku faanaya joogitaankooda iyo hadalkooda intaba, laakiin 3 dii Dabaqoodhi ee halkaas fadhiyay waxay ku jireen ciqaab iyo cidhiidhi.”
Waxaa u suurta galiwaayay safaaradii cadawga in ay kulan koodii furtaan wakhtigii ay ku balansanaayeen, iyagoo bilaabey habar wacasho iyo polis raadin, maadaama ay ku dhex arkeen goobta aan ahayn intii ay isku halaynayeen ee saminaarka iyo awaamirtooda ay siin lahaayeen.
Booliskii oo goobta yimid ayaa inkabadan 1 saac iyo dhawr iyo labaatan daqiiqo ay ku hortaagnayeen albaabka xubnihii jaaliyadda oo uga warbixiyay Booliska in dadka halkan ku qaabinaya shirka ay yihiin mujrimiin dadka dhiigooda caba.
Wuxuu noogu sheegay warbixinta xubinka noo soo gudbiyay inay hadafkii ay ka lahaayeen ka gaareen oo ahaa buu yidhi;
1. In aan Safiirka Wayaanaha dareensiino iyo intii halkaas joogtayba in uusan safiir u ahayen wadan ee uu safiir u yahay xukun dhiigyacab ah, kana mid ah kuwa maalin walba mid laga takhalusayo eey safiiradiisii inta goori goortahay gacmaha taagayaan.
2. In dhamaanba jawaasiistii iyo dabaqoodhiyadii halkaas fadhiyay uu cir iyo dhulba ku yaraaday.
3. In aan dhamaanba qowmiyadaha mucaarad ka ku ah taliska dhiigyacabka ah aan si wda jir ah isugu xidhnaano.
Kooxda loogu yeedhay shirka ee la doonayay in la qoro jawaasiis ka soo xogwarama jaaliyadda Holland ayaa waxay kala yihiin;
1. Maxamed Kabare Shiil,
2. Bashiir Maxamed Khaliif
3. Axmed Feenlo.